November 2020 - WARAR HUBAN
Madaxweyne Deni oo dekeda Boosaaso ka mamnuucay Shilinka Soomaaliga
November 30, 2020 F.G 0
Madaxweynaha Puntland ayaa soo saaray wareegto dekeda magaalada Boosaaso looga mamnuucay in canshuurta lagu qaado shilinka Soomaaliga. Talaabadan ayaa timid ka dib markii sicir barar xoogan uu hareeyey qiimaha raashiinka iyo waxyaabaha kale, kaasoo ka dhashay qiimaha doolarka oo gaaray heerkii ugu soo sareeyey. Wareegtada Deni laguma sheegin lacagta canshuurta lagu qaadayo bedelkii shilinka Soomaaliga, balse waxaa iska cad in lacagta doolarka Maraykanka lagu bixin doono canshuurta. Hoos ka akhriso Wareegtada Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi oo tixraacaya talo-bixinta Guddiga dowladdu u xilsaartay sicir-bararka ayaa ku amray Wasaaradda Maaliyadda Puntland in aan kastamka Dekedda Boosaaso, cashuurta Dowladda lagu qaadi karin lacagta shillin Soomaaliga. Ku: Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland Og: Xisaabiyaha Guud Ee Dowladda Puntland Og: Hanti Dhowrka Guud Ee Dowladda Puntland Og: Bangiga Dowladda Puntland Ujeeddo: Joojin Qabashada Shillin Soomaaliga ee cashuurta Kastamka Dekedda Boosaaso. Iyadoo laga duulayo talo bixinta Guddiga Dowladdu u xilsaartay sicir-bararka. Laga billaabo 1-da December 2020, waxaa la joojiyey in aan kastamka Dekedda Boosaaso, canshuurta Dowladda lagu qaadi-karin lacagta Shillin Soomaaliga. Fulin wacan Siciid Cabdullaahi Deni Madaxweynaha Dowladda Puntland
Ururka TPLF Oo Sheegatay Inay Soo Rideen Diyaarad Dagaal
Ciidamada TPLF ee gobolka waqooyi ee Tigray ee dalka Ethiopia ayaa sheegtay inay soo rideen diyaarad militari, islamarkaana ciidamada federaalka dib uga qabsadeen magaalo, Axaddii. Sheegashadooda ayaa imaneysaa ayada oo weli dagaalka gobolka uu socda xilli ay dowladda sheegtay Sabtidii inuu dhammaaday, kadib markii ciidamadeeda ay qabsadeen magaalada caasimadda ah ee Mekelle. Weli ma jirto jawaab ay dowladda ka bixisay sheegashadan, oo uu ku dhowaaqay hoggaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael, kaasi oo farriin qoraaladeed u diray wakaaladda wararka Reuters. Sida ay sheegeen dhinacyada isku haya gobolka Tigray ayey adag tahay in la xaqiijiyo, maadaama taleefonada iyo qadka Internet-ka ee gobolka Tigray uu go’anaa ama aad u xadidnaa, tan iyo markii dowladda ay ku dhowaaqday dagaalka, 4-tii November. Abiy ayaa habeenkii Sabtida sheegtay in ciidamada dowlkadda ay qabsadeen caasimadda Mekelle. Wuxuu sidoo kale wacad ku maray inay soo xiri doonaan oo ay cadaaladda horkeeni doonaan “dambiilayaasha” TPLF. Hoggaamiyaha TPLF Debretsion ayaa Reuters u sheegay in inkasta oo ay ka baxeen magaalada Mekelle, haddana ay sii wadi doonaan inay dagaalamaan.
AKHRISO:Kenya oo sheegtay in aanay warqad rasmi ah ka helin dowladda Soomaaliya
Dowladda Kenya ayaa shaacisay in aanay ka helin warqad rasmi ah oo ku saabsan codsiga dowladda Soomaaliya u dirtay in Safiirka Kenya Lucas Tumbo inuu ka tago Muqdisho, una yeeratay Safiirkeedii Nairobi u joogay Amb. Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan). War saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa lagu sheegay inay ka xun tahay go’aanka dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa ay sheegtay inay ixtiraameyso madax bannaanida dhuleed, midnimo iyo madax banaanida siyaasadeed ee wadamada oo dhan. Kenya ayaa sheegtay inay sii wadeyso taageerada ay siiso shacabka Soomaaliyeed ee la xiriira xasilloonida iyo nabadgelyada.
Maxkamada Ciidamada Oo Dil Ku Xukuntay Sarkaal Milatari
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun ku ridday saddex askari oo ku eedeysan Afduub, Kufsi iyo Dil. Maxkamada ayaana la soo taagay Sadex Askari oo lagu kala Magacaabo Xidigle Xoogga Nuur Aadan Rashiid, Saddex Xerigle Maxamed Maxamuud Buulle & Dable Salaad Xareed Cali, waxaana lagu eedeeyay dil iyo kufsi loo geystay Ismahaan Bakaal Maxamed. Guddoomiyaha Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida qeybta 27aad Gaashaanle Maxamed Amiin Cabdulle Aadan, ayaa sheegay in maxkamada xukun dil ah ku riday Xiddigle Xoogga Nuur Aadan Rashiid (Madoobe) oo lagu helay in kufsi iyo dil u geestay Ismahaan Bakaal. Maxkamada ayaa sidoo kale shan sano oo xabsi ah ku riday Saddex xarigle Xoogga Maxamed Maxamuud Buulle oo lagu helay in uu lahaa qorayga dilka lagu geestay, waxa ayna Maxkamada sii deysay Dable Booliis Salaad Xareed Cali oo dambi lagu waayay. Askarigan katirsan ciidanka milatariga Soomaaliya ayaa dhawaan degmada Balad Xaawo dil iyo kufsi ugu geestay Ismahaan Bakaal Maxamed, waxaana falka uu geestay askarigan si weyn uga carooday bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhyaqan Balad Xaawo.
Farmaajo Iyo Fahad Ogaada 70 Maalin kaliya ayaa hartaye la socda!!!
November 30, 2020 M.Jo 0
70 Maalin kaliya ayaa hartaye la socda!!! Musiibadii jimcaha ayey ka aamuseen 24 saac, ileen ma hayaan xal iyo xog ay nala wadaagaan balse shalay subax bey nagula soo jarmaadeen Macalin Ilkacase toogashadiisa kaasoo dil suge ahaa muddo dheer, xalayna waxey nagu seexiyeen iney u yeerteen Safiir Tarsan oo Coffe isaga cabaya SYL Hotel iyo inuu dalkiisa ku laabto dhufurigii Kenyatiga ahaa oo dhowr maalmoodba Ugali isaga cunayay Nairobi. Marin habaabin, jiho wareerin, been abuur, maaweelin iyo waqti dhumis waan kasoo dharagnay 4 sano, waa xifdinay dhaqan kasta iyo ficillada isku eg oo is leedihiin ka iibiya bulshadan dhibtoon ee idinka sugeysay horumar, amni, dhaqaale iyo horey u socod. Waxaaba iigu sii daran waabsiga indha caddeyska ah markey shacabka ku af jigayaan, kala dooro dalkaaga iyo cadowga Kenya, kala saar siyaasadda iyo jaceylka waddankaaga, madaxweynaha beri wuu baxayaa laakiin dalka wuu jirayaa, waxaa tahay cadow haddii aad taageeri weysid go’aamada dowladda😃 Ku ciyaara oo cabburiya inta maskaxda yar, balse inta badan bulshadu waa xor oo wey ka koreen in la isticmaalo caqliyadooda, si fiican beyna [Sii aqri]
Diiwaangelinta codbixiye-yaasha oo ka billaabatay Somaliland
Wajigii koowaad ee diiwaangalinta codbixiye-yaasha Somaliland ayaa shalay oo Axad ahayd ka bilaabantay gobolka Awdal iyo degmooyin kale, waxaanay goobaha ay shalay ka billaabantay diiwaan -galinta socon doontaa ilaa labada bisha December ee soo socota. Diiwaan-galintan ayaa looga dan leeyahay sidii ay Kaadhadhka cod-bixinta u qaadan lahaayeen dadkii aan hore isku diiwaan galin iyo dhalinyarada qaan gaadhka noqotay intii ka dambaysay doorashadii madaxtinimo ee bishii November, sanadkii 2017 ka qabsoontay Somaliland. Gudiga doorashooyinka Somaliland ayaa gobollada iyo degmooyinka u qorsheeyay in ay diiwaan galintani ka socoto qayb kasta muddo 4 maalmood ah.
Dowlada Kenya oo ka hadashay Go’aankii Dowladda Soomaaliya
Dowladda Kenya ayaa si kooban waxaa ay uga hadashay Go’aankii xalay dowladda Soomaaliya ay dalka uga saartay Safiirkii Kenya ee Soomaaliya Lucas Tumbo,isla markaana ay ugu yeertay Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Arrimaha dibadda Kenya Macharia Kamau ayaa sheegay inay Kenya ka xun tahay Go’aanka dowladda Soomaaliya, isagoo balan qaaday in labada dal ay si dublamaasiyadeed uga wada hadli doonaan arrintaas. Waxaan si rasmi ah uga jawaabi doonnaa wadiiqooyinka ku habboon dhowaan,” ayuu yiri Mr Kamau oo khadka taleefanka ka hadlayay Wargeysa Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya. Sanadihii la soo dhaafay waxaa aad u xumaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo salka ku haaya Arrimo la xiriira kiiska Badda & doorasoyinkii ka dhacay Jubbaland, waxana taasi ay sababtay in dowladda Soomaaliya ay joojiso jaadkii ka imaan jiray dalkaasi Kenya.
Banaanbaxa Ka Dhacay Xalay Beledweeyne “Dooni Mayno Cali Guudlawe Dooni Mayno HirShabelle “
Wararka Ayaa Sheegaya in Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan uu xalay ka dhacay Banaanbax xoogan oo rabshado watay oo looga horjeeday dowlad Goboleedka Hirshabeelle, kaasi oo ay dhigeen Qaar Ka mid ah Dadka deegaanka. Dadweyne farabadan ayaa isugu soo baxay waddooyinka Magaalada, kuwaasi oo ahaa kuwo aad u Dhaliilay doorashii ka dhacday Magaalada Jowhar ee uu kusoo baxay Madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo Yuusuf Daba-geed. Sidoo kale banaanbaxayaasha ayaa ku qeylinayay erayo ay uga soo horjeedan dhismaha maamulka Hirshabeelle iyo Cali Guudlaawe, isla markaana mararka qaarkood gubayay taarayo waaweyn oo Hakad geliyay isku socodka gaadiidka isticmaala waddooyinka. Dadkii dhigaayay banaanbaxa ayaa sidoo kale ahaa kuwo ka careysan xarig loo geystay xubno ganacsato ah oo lagu eedeeyey horinta banaanbaxyadii maalin kahor ka dhacay Magaalada ee lagu Diiddanaa in la weeraro maleeshiyaadka Jeneraal Abuukar Xuud. Inta uu socday banaanbaxaas ayaa waxaa Hakad galay isku socodka gaadiidka, waxaana la xiray inta badan goobaha ganacsiga, iyadoona xalay oo dhan xaaladda Magaalada Baladweyne ay aheyd mid aad u kacsan. Malamihii lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray dadaadlo lagu doonayay [Sii aqri]
Al-Shabaab Oo Saaka Dagaal Kula Wareegay Deegaan Bacadweeyn ee Galmudug
Wararka Ka imaanaya Gobolka Mudug gaar ahaan deegaanka Bacaadweyn ayaa Sheegaya in Subaxnimadii hore ee saakay halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay Ciidanka dowladda Federaalka iyo Al-shabaab. Dagaalkan ayaa bilowday, kadib markii rag hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab ay weerar dhowr jiho ah ku qaadeen Saldhig Ciidanka dowladda iyo kuwa Galmudug ay ku leeyihiin deegaanka Bacaadweyn, sidaasina uu ku dhacay dagaalka. Dhawaqa rasaasta labada dhinac ay isweydaarsanayeen ayaa dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta u sheegay inay maqlayeen, isla markaana mar qura lagu soo waaberiistay deegaanka uu ka socdo dagaal. Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu warramay inuu ka dhashay weerarkii lagu qaaday Bacaadweyn, uuna soo kala gaaray labada dhinac, in kastoo aan la xaqiijin karinta inta uu la egyahay, maadaama aan aaga laga agdhawaan. War qoraal ah oo lagu faafiyay baraha dhinaca Internet-ka Al-shabaab ayaa waxaa ay sheegteen inay dagaal kula wareegeen gacan ku heynta Bacaadweyn, isla markaana gacanta ay ku dhigeen illaa 5 gaari oo nuuca dagaalka ah. Sidoo kale Shabaabka ayaa sheegtay in hubka iyo gaadiidka ay [Sii aqri]
Codsi Ka Yimid Qoor Qoor iyo Musharaxiinta Oo Aqbalay
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa xalay kulan gaar ah Musharaxiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya kula qaatay hotelka Jasiira ee Magaalada Muqdisho. Kulanka oo saacado dhowr ah qaatay ayaa waxaa looga hadlay arrimo ku aadan khilaafka Madaxda dowladda Federaalka iyo Musharaxiinta Madaxweynaha iyo xaaladda siyaasadeed ee xiligaan uu dalka uu ku jiro. Madaxweyne Qoorqoor oo maalmihii lasoo dhaafay waan-waan ka dhex-waday Madaxda dowladda iyo Musharaxiinta ayaa Codsaday Musharaxiinta in iyaga iyo Dowladda uu dhexmaro wadahadal, uuna isaga garwadeyn ka noqon doono. Falanqeyn kadib Musharaxiinta ayaa Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ka aqbalay Codsigii uga yimid ee ahaa inuu dhex dhexaadiyo labada dhinac, isla markaana khilaafyada jira lagu dhammeeyo wada-hadal. Madaxda dowladda iyo xubnaha Musharaxiinta ayaa xiligaan waxaa ka dhexeeya khilaaf meel adeg gaaray oo ku aadan guddiyada doorashooyinka heer Federaal iyo heer maamul Goboleed ee la magacaabay, waxaana Guddiyadaas lagu sheegay inay ku jiraan xubno ka tirsan NISA iyo shaqaalaha dowladda. Sidoo kale Musharaxiinta ayaa dalbaday in la kala diro Guddiyada doorashooyinka dalka, sidoo kalena xilka la qaado taliyaha Hay’adda NISA Fahad [Sii aqri]